त्यसपछि उनले मुटु निकाले…. - Kohalpur Trends
एउटा अकल्पनीय दर्दनाक घटना भएको छ । त्यहाँका एकजना व्यक्तिले छिमेकी महिलाको ज्या न लि एर मृतकको मुटु बाहिर निकाले । त्यसपछि उक्त मुटु लिएर आफ्नो घरमा गई आलुको तरकारीसँगै पकाएर परिवारका अन्य दुईजना सदस्यलाई समेत खान दिए । त्यसरी खुवाइसकेपछि परिवारका ती दुई सदस्यको समेत उनले ज्या न लि एका छन् । यो ज’घ’न्य अ’प’रा’धका विषयमा अमेरिकी पुलिसले हाल अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
लरेन्स पल एन्डरसन नामका ती पुरुषले ओक्लाहामा सिटीको दक्षिण पश्चिमस्थित चिकशामा बस्ने आफ्नी छिमेकी एन्ड्रिया लिन ब्लेंकेनसीपको उनकै घरमा गएर ज्या न लि एका थिए ।
उनले घटना घटाए सँगै उनले ती महिलाको छा ति चि रे र मु टु बा’हिर नि’कालेर घरमा ल्याए । घरमा ल्याएर उक्त मुटुलाई आलुसँगै पकाएर उनले आफ्ना काका काकीलाई तरकारीको रुपमा खानका लागि पस्किए ।
लरेन्स यत्तिमा मात्र रोकिएनन् । उनले आफ्ना काका र उनकी चार वर्षकी छोरीको पनि ज्या न लि ए र काकीमाथि समेत ह ‘म’ ला ग’रेर ग’म्भीर घाइते बनाए । लरेन्स यसअघि पनि विभिन्न आ’परा’धि’क घ’टनामा दो’षी ठहर भै’सकेका व्यक्ति भएको बताइएको छ । उनी केही समयअघि मात्रै जेलबाट बाहिर निस्किएका रहेछन् । घटना अमेरिकाको ओक्लाहोमामा भएको हो । एजेन्सी
यो पनि : मुटु स्वस्थ राख्ने कसरी राख्ने ?
चिन्तारहित जिन्दगी जिउने प्रयास गर्नुपर्छ।नियमित रुपमा स्वास्थ्य परिक्षण गर्नुपर्छ। विशेष गरि ३५ वर्षभन्दा माथिको उमेर भएकाहरुले बर्षमा २ पटक स्वास्थ्य परिक्षण गर्नुपर्छ ।
Previous Previous post: प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारबाट १६५ वटा सडक शिलान्यास गर्दै
Next Next post: तेस्रो बिहे नगर भन्ने प्रश्न गरेपछि , के मेरो बिहे खर्च उनीहरुले तिर्नुपर्ने हो भन्दै अभिनेत्री श्वेता तिवारी रिसाइन